प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने | चितवन पोष्ट
प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने
हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड र काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
बुधबार ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल, ३ नम्बर प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितसहित हेटौँडामा भएको बैठकबाट विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने जानकारी गराइएको थियो ।
प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ३० करोड रूपैया“सम्म खर्च गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड रूपैयाँबराबरको विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने योजना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले विक्रम सम्वत् २०८५ सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकासहित चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीतिअनुरुप विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
नमुनाका रुपमा यसवर्ष ३० करोड रूपैया“बराबरको विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेश सञ्जाल जोडिने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन हुने बताए । सरकारी लगानीको संस्था भएकोले पनि साझा यातायातसँग सहकार्य हुने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बस खरिदका लागि १० करोड रूपैया“ छुट्याएको भन्दै साझा यातायातसँगको सहकार्यमा बस खरिद गरेर चलाउन लागिएको बताए ।
त्यस्तै, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले काठमाडौँका लाखौँ यात्रुले यातायातमा समस्या खेपिरहेकाले साझा यातायातले धेरै राहत दिएको बताए ।
अझै पनि यो समस्या कायम रहेको भन्दै साझामार्फत चल्ने बसको संख्या र सुविधा बढाउनुपर्ने उनले बताए । छलफलमा प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, प्रदेश सांसद् दीपक निरौला, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा, सदस्य श्याम बस्नेत, साझा यातायातमा प्रतिनिधित्व गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन महाशाखाका प्रमुख वसन्त आचार्यको पनि उपस्थिति थियो ।